Lapho ungaya khona unyaka omusha - World Tourism Portal
Unyaka omusha yisikhathi noma usuku lapho kuqala khona unyaka omusha wekhalenda kanye nonyaka wekhalenda ubala ukwanda ngakunye.
Amasiko amaningi agubha umcimbi ngendlela ethile kanye Usuku lwe-1st lukaJanuwari kuvame ukumakwa njengeholide likazwelonke.
Khalenda likaGregorian, uhlelo lwekhalenda olusetshenziswa kakhulu namuhla, uNyaka omusha kwenzeka ngoJanuwari 1 (Usuku Olusha). Lokhu bekunjalo futhi kukhalenda lamaRoma (okungenani ngemuva kwe-713 BC) kanye nekhalenda likaJulius elalandela.
Amanye amakhalenda asetshenziswe ngokomlando ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba; amanye amakhalenda abala iminyaka ngokwezibalo, kanti amanye awenzi kanjalo.
Unyaka Omusha WaseChina, eyaziwa nangokuthi uNyaka Omusha Wonyaka, kwenzeka minyaka yonke ngenyanga entsha yenyanga yokuqala, cishe ekuqaleni kwentwasahlobo (Lichun). Usuku ngqo lungawa noma nini phakathi kukaJanuwari 21 noFebhuwari 21 (okuhlanganisiwe) wekhalenda likaGregorian. Ngokwesiko, iminyaka yayimakwe elinye lamaGatsha Asemhlabeni ayishumi nambili, amelwe yisilwane, nelinye lamaShumi asezingeni lezulu, ahambelana nezinto ezinhlanu. Le nhlanganisela ijikeleza njalo ngeminyaka ye-60. Kungumkhosi waseShayina obaluleke kakhulu onyakeni.
Unyaka Omusha WaseKorea LuSuku LwamaNyaka Omusha noma Lunar New Year. Noma uJanuwari 1 empeleni, usuku lokuqala lonyaka, uSeollal, usuku lokuqala lwekhalenda lenyanga, unencazelo eyengeziwe kumaKorea. Umgubho woNyaka oMusha kaLunar kukholakala ukuthi waqala ngokuvumela inhlanhla futhi wavimbela imimoya emibi unyaka wonke. Njengoba sekuphele unyaka omusha futhi kungenwa okusha, abantu babuthana ekhaya futhi bahlale emindenini yabo kanye nezihlobo, bathole lokho abekade bekwenza.
Unyaka Omusha waseVietnam yi-Tết Nguyên Đán okuvame kakhulu ngayo ukuthi kube usuku olufanayo nonyaka omusha waseChina ngenxa yamaVietnam asebenzisa Ikhalenda lenyanga elifana nekhalenda laseChina.
ETibet unyaka omusha yiLosar futhi iwela phakathi kukaJanuwari noMashi.
Ukhathele ukubona ubuso obufanayo ngobusuku bonyaka omusha? Ngabe ufuna ukubona izindawo ezintsha, izindawo ezintsha, ukuhlangana nabantu abasha? Thola izindawo ezingcono kakhulu zokugubha uNyaka oMusha futhi uthole amadili amahle amahhotela wonyaka omnandi woNyaka Omusha. Hlela indawo yokuhlala nehhotela lakho ngentengo enhle kakhulu kanye nemisebenzi yakho emihle.
Kulula ukuhlekisa ngobusuku bonyaka omusha: kuyabiza kakhulu, kuminyene kakhulu, ingcindezi eningi kakhulu yokuba nobusuku obukhulu kakhulu empilweni yakho. KULUNGILE, ungagibela phansi ekhaya - noma ungalenza likhumbuleke ngempela ngokushaya elinye lamaqembu o-Eva oNcibijane emhlabeni. Ukusuka lapho kuqhuma imililo kuzo zonke izindawo zasemuva eziphefumulayo kuya emaphathini asemgwaqweni ezindaweni ezipholile nezihambisi zobusuku bonke emabhishi anamahloni amnandi, akukho ukushoda kwezindlela ezimangalisayo zokukhala ngonyaka omusha. Ngakho-ke, qala unyaka njengoba ufuna ukuya eholidini
Gubha unyaka omusha wenza iHighland Fling phakathi Edinburgh, kubhekwe iziqhumane zomlilo Sydney I-Harbour Bridge noma umdanso ogwini eThailand. Thola usizo oluncane lokunquma ukuthi ungayi kuphi nalesihlahlandlela ezindaweni ezihamba phambili zoNyaka Omusha emhlabeni.
Eminye imininingwane ingahle ishintshe, kepha unyaka nonyaka ukuphuma, lezi izindawo emhlabeni wonke zinegama elifanelekile ngokwesiko ukulahla i-shindig enkulu yoNyaka oMusha.
Qiniseka ukuthi uhlela kusenesikhathi emaphathini aphambili nezindawo zokubuka ezinhle kakhulu zomlilo. Ezinye izindawo zikhokhisa ukuqashelwa, futhi amathikithi athengisa ngezinye izikhathi izinyanga ezizayo.
Nazi ezinye izindawo ezinhle lapho ungahambela khona uNcibijane wosuku ongasoze wazikhohlwa:
Ukuya kuphi unyaka omusha
ESydney, e-Australia, ungumuzi wokuqala omkhulu wamazwe omhlaba ukubingelela uNyaka oMusha phakathi kwamabili. Umbukiso omkhulu weziqhumane womlilo wenzeka eSydney Harbour nge-Opera House ne-Harbour Bridge enikezela ngemuva langemuva elihle.
Lo mlilo obizwa nge-fireworkvava ubukelwe ngabantu abangaphezu kwesigidi ababuthane ngaphesheya kosebe - kodwa umqondo ongcono ukujoyina izikebhe zabantu abebedlubulundela behudula emanzini. Ungaqasha isikebhe, ulethe ama-bubble akho bese uqala ukubala kusenesikhathi. Ama-Landlubers angahle athande ukugcina itafula elingaphandle kwenye yezindawo zokudlela ezisetshenziselwa amanzi yiSydney Harbour Bridge ukuze kube nesihlalo esingaphambili.
Ngenye indlela, hamba uye e-Cockatoo Island bese usetha ipiyano yenyanga ulungiselela umbukiso; ungakwazi ukukhempa noma ukucwilisa lapho ubusuku, inqobo nje uma ubhuka indawo kusengaphambili. Ubusuku bonyaka omusha ngaphandle kwempi yokuphela kobusuku yetekisi? Yebo ngicela.
Iziqhingi ezisechwebeni noma amapaki omndeni ahambisana nhlangothi zombili zinikeza ukubukwa okuhle.
Ibhonasi ye Sydney: Ihlobo lisanda kuqalwa lapho, futhi ungasebenzisa futhi amabhishi wedolobha.
Isibhakabhaka esimangazayo eHong Kong sinikeza izivakashi ezingasoze zabukhohlwa, kanti iziqhumane zoMlilo zoNyaka omuNyaka zisuka nje zibhekise amabombo. Izicishamlilo ezikhanyisela iVictoria Harry enhle isethwe emculweni.
Ungahle ubambe umbukiso ogqamile kusuka kwelinye lamahhotela amaningi eHong Kong ngokubuka okuhle. Izixuku ziqoqa amahora ambalwa ekuseni e-Star Ferry Pier (Tsim Sha Tsui) kweminye yemidlalo yeshashalazi, yokudansa neyokwenza amasekethe.
Ngenkathi useHong Kong, ungahle uthande nokuthatha e-Ocean Park, indawo yokuzijabulisa oyithandayo.
Umbukiso obukekayo womculo we-pyro-up ukhanyisa iVictoria Harbour yaseHong Kong lapho kuhlasela khona phakathi kwamabili ngama-lasers, iziqhumane zomlilo kanye nama-LED aqoshwe ngopopayi eqhuma kule ndawo edumile yedolobha. Ithiphu lethu: ukhohlwa ukujoyina i-crush esiteji samanzi. Esikhundleni salokho, bukela umbukiso usuka ekudleni okungenamuntu emanzini, noma omunye wemishayo yophahla oluningi lwe-HK lomhlaba.
Kunezindawo eziningi ezithulele ohlangothini lweKowloon lwamanzi ezinikeza izihlalo ezinkulu ngaphandle kwezixuku ezinkulu.
IBangkok ivame ukufaka ngaphezulu uhlu lwemikhawulo yamadolobha amahle kakhulu obusuku base-Asia. Ngakho-ke, kuyindawo yemvelo ukukhala onyakeni omusha uma uthanda izixuku, umsindo nomsindo.
Impendulo kaBangkok ku-Times Square, eCentralWorld Plaza ngenye yezindawo zokubuthana kwemicimbi ebalulekile. Enye indawo ethandwa ukubuthwa yindawo yokuthenga nokuzijabulisa yase-Asiatique eceleni komfula iChao Phraya.
Azikho izindawo eziningi eMhlabeni zokufakaza umbukwane ngaphezulu (okwenziwe ngamadoda) kune-Dubai, futhi i-Eve yoNyaka omuSha yisikhathi esihle sokuwuthatha. Iziqhumane zomlilo eziqhumile kulo muzi ziyabonakala ezikhaleni zomphakathi, kepha ukubukwa okuhle kakhulu kuvela ekuwohlokeni amaqembu abanjwe ezitezi ezinkulu zedolobha, ikakhulukazi amade kakhulu emhlabeni, iBurj Khalifa, lapho amaqembu evutha bha khona phansi kwe-122nd. IDubai yake yaba ngumphathi werekhodi lomhlaba omkhulu kunawo wonke owake wasungulwa, owethulwa kwi-Eve New Year's Eve 2013, ngaphambi kwePhilippines ngaphambi kokuhlakazwa kwedolobha lase2016 IDubai iyawathanda amarekhodi, ngakho-ke bukela ukuthi idolobha libuyise isihloko ngelinye ilanga.
Akukude kakhulu, iBurj Plaza iyathula kancane futhi ithandwa yimindeni. Futhi uma uthenga emqondweni, hlola iDubai Mall, enye yezindawo ezinkulu kakhulu emhlabeni.
IDubai yakha idumela njengendawo enkulu yokudla, ngakho-ke ungahle ufise ukungena ezindaweni zokudlela eziphezulu lapho ulapho.
I-Red Square yomlando eMoscow inikezela enye yezindawo ezibandayo kakhulu kepha futhi inesinye sezilungiselelo ezihehayo kakhulu zokubukwa komlilo we-New Year's Eveworks.
Ngenkathi ulapho, ungafuna ukubona elinye lamathuna avakashelwe kakhulu emhlabeni, lelo lomholi wamakhomanisi uVladimir Lenin, noma uthathe uhambo lwezingqinamba zeCold War kusukela kusikhathi seSoviet.
Uma ufuna ukugubha ngesitayela esihle ngempela ne-Russian flair, i-Ritz-Carlton eMoscow kungenzeka ibe ngeyakho. Itholakala enkabeni yedolobha futhi inebha yophahla.
IKapa lingenye yamadolobha akhiwe kahle e-Afrika - nomhlaba. Iziqhumane zomlilo zoNyaka oMtsha ziwenza ube muhle ngokwengeziwe.
Uma usesimweni seqembu, iCape Point Vineyards enye yezindawo eziningi ongazicabanga.
Yenza lonke uhambo lwakho ngokuhambela izivini ezidumile zaseNingizimu Afrika ezungeze iKapa.
ILondon yindawo ekhethekile ekuqaleni konyaka. Idolobha liyakhanya futhi izikhungo ezizinze enhlokodolobha zizokhipha zonke izitobha zokwenza lo Mbukiso Wonyaka Omusha eLondon ube yinto engalibaleki. Ngakho-ke, hlanganisa osondelene nabathandekayo bakho bese uthi ihlombe kuNyaka Omusha. Pakati kwamabili ngoNcibijane woNyaka, isibhakabhaka saseLondon ebusuku sizoba ukukhanya okukhulu nombala ngokukhombisa ama-pyrotechnics amahle asuka emfuleni oseLondon South Bank odumile, owethulwe yiMeya yeLondon ne-Unicef.
Isitebele iLondon eceleni kweThames ihlala ihlinzeka ngemibhalo engemuva yama-fireworks ka-New Year's fireworks. Amathikithi athengiswa ngokushesha ngendawo esemthethweni, kepha ungakwazi ukubona iziqhumane mahhala ezintabeni ezinjengePrimrose Hill, iPhalamende Hill eHampstead Heath, Greenwich Park nase-Alexandra Palace.
Iphuzu elilodwa elihle kakhulu ukuhamba ngesikebhe ngomfula eMonsoon Clipper noma kwezinye izikebhe.
Indlela enhle yokubingelela ngethemba lonyaka omusha ukuzinza kwenye yezitolo zaseLondon. Ngenkathi ngilapho, abalandeli bobukhosi baseBrithani bangafuna ukuvakashela amasayithi anjengeKensington Palace, lapho kuzalwa khona iNdlovukazi uVictoria.
ILondon iyaqhubeka nokufaka unyaka omusha ku-1 Januwari nge-New Year's Day Parade. (© vakashela i-London)
Kusebusika maphakathi neRio de Janeiro ngalesi sikhathi sonyaka, yingakho iningi labaphathi bephathi begwema amakilabhu we-sweaty angaphakathi ekhaya bese bethatha iqembu baye olwandle. Abantu abangaphezulu kwezigidi ezimbili bahlangana kwi-Copacabana engamamayela angu-2.5 ubude be-samba, iChampagne kanye neziqhumane ngomlilo ngo-New Year's Eve - ukuthola indawo enhle, qala ukukhipha indawo yakho kusuka ku-10pm. Qaphela ukuthi ihamba phambili ngaphambi kwehhotela eliyindawo eyaziwa njengeRio, iCopacabana Palace, njengoba le yindawo yamakhonsathi esiteji esikhulu.
Kuyisiko ukugqoka ezimhlophe eRio ku-NYE - kuthiwa kuletha inhlanhla kuNyaka oMusha. Kepha mhlawumbe ushiye izingubo zakho ozithandayo ekhaya, ngaphandle kokuthi awunendaba nokubhaliswa ngeChampagne, ufafazwe ngesitayela se-F1 ngezixuku ezixakile.
Songa ufudumele bese uqhekeka uvule i-champagne ukugubha unyaka omusha nabaseNew York. Izigidi zihlangana ukubukela ukuwa kwebhola elidumile le-Waterford crystal ibhola ku-Times Street lapho kushayisana khona phakathi kwamabili bese kuthi iziqhumane zomlilo zikhanyise iStatue of Liberty.
Unyaka nonyaka, i-Big Apple iyisizinda somkhathi kubantu abaningi, kepha ngo-New Year Eve iyisikhungo sabo bonke abantu. Kunezindawo zezikhathi ezihlukene ze-38 ezibalwe kuze kube phakathi kwamabili ngoDisemba 31, kepha wonke amehlo aku-Times Square, njengoba abadlali abangaphezu kwesigidi esigidigidi emhlabeni wonke baphokophela ukubona ibhola elikhazimulayo lilahla phezulu ngaphezu kwesixuku sabalingani besigidi esisodwa esikhonkotha unyaka omusha. Amakhonsathi afakwe ku-Star ajabulise izixuku ezifika ekuseni kakhulu ukuze zibukwe, kodwa amaqembu ophahleni lwendlu lonke anikeza ukubukwa kweziqhumane ezivuthayo zalabo abangazibekile phansi ngokuxinana nabantu abangabazi ngobusuku obunamandla baseNew York.
Isikwele i-Times eManhattan. Kuyafana nobusuku boNyaka oMusha kulo lonke elase-United States. Noma ungekho lapho uqobo, kukhona ithuba elihle lokuthi ubuke ukuwa kwebhola elidumile kuthelevishini.
Uma ungazizwa uthanda ukungena ku-Times Square nabanye abantu abayizigidi eziyi-1, nazi ezinye izinketho:
- Kubhekise kwiGrand Army Plaza, esanda kuphuma eProspect Park eBrooklyn, ukuthola iziqhumane zomlilo nokujabulisa. Udinga ukufika kungekudala ukubukwa okuhle kakhulu.
- Uma u-21 noma ngaphezulu, zama inhlanhla yakho eRorts Resorts World Casino, okuwukuphela kwekhasino edolobheni. Eduze ne-JFK Airport, ngokwesiko iphonsa iphathi yokuphuma kwe-NYE.
I-Vegas izibani ezikhanyayo unyaka wonke, kepha konke kuphuma ngo-Eva Wonyaka Omusha.
I-Strip ivaliwe izimoto, futhi abahamba ngezinyawo bathatha umcimbi ongenakulibaleka. Ezinzulwini zobusuku, amakhasino ahlukahlukene aqala ukugcwala imililo egcwele ophahleni lwezakhiwo zawo. Ungabuka umbukiso usuka e-Stratosphere tower.
Izivakashi ziyelulekwa ukuthi zibhukhe amagumbi amahhotela kusenesikhathi, njengoba amanani eVietnam ehla eholidini. Baxwayiswa nokuthi bagqoke ngokufudumele - ugwadule luyaphola ebusuku kakhulu, ikakhulukazi ebusika.
Iziqhingi zaseMadeira, ePortugal
Ukusuka emphemeni womkhumbi wakho wesikebhe noma echwebeni laseFunkchal, iziqhumane zomlilo zikhulu kangangokuba awunakuphuthelwa.
Umbukiso odumile wokucima umlilo, owaziwa ngokusemthethweni yiGuinness World Records, kwi-2006, njengombukiso omkhulu kakhulu weziqhumane zomlilo emhlabeni.
Lesi simo esihle kakhulu, sobuhle obungandile, simane nje sihluke, kube nezinkulungwane zamalambu anemibala ehlukahlukene ahlobisa inkundla yemidlalo yaseFunchal, eyiguqula yaba isigaba esikhulu. Njengoba iwashi ligadla ngabayishumi nambili, kwi31st, isibhakabhaka sikhanya ngombala, ukukhanya kanye nethemba ngonyaka omusha osanda kuqala.
Ungaphuthelwa futhi ufike uzophumelela lo mcimbi eMadeira!
IBerlin igubha u-Eva woNyaka oMusha ngesitayela - nabavakashi abacishe babe yisigidi bahlangane eSangweni laseBrandenburg ukuzokwamukela kuNyaka oMusha! Konke ukuphathwa kwendabuko kufakwe emugqeni - ngaphezu kwamakhilomitha amabili ezigaba zokuzijabulisa zemibukiso, amatende wephathi, imibukiso ekhanyayo ne-laser kanye nenqwaba yokudla neziphuzo. Umbukiso obabazekayo wokuqhumisa umlilo uqala phakathi kwamabili e-dot - njengokushaywa kwezingilazi njengoba abakwaBerliners nabavakashi bezongamela unyaka omusha. Amaqembu alandelayo azohlala emahoreni amancane!
Amandla ka-Berlin noma yini ahamba kahle ashaqekile futhi aphephisa leli phathi elikhulu elivulekile phakathi kweS Brandenburg Gate neVictory Column. Omunye wemikhosi emikhulu yangaphandle yaseYurophu, le jamboree ibona abantu abacishe babe yisigidi bebuthana endaweni yomhlangano wama-1.6-mile. Kungcono nokho, kumahhala futhi kugcina kungumpompo kuze kube yi-3am. Lindela umculo obukhoma, ama-DJs, imibukiso ye-laser, ukudla futhi, iziqhumane.
I-Berlin ayimfushane ngamakilabhu asezingeni lomhlaba, kepha ingadi yophahla e-House of Weekend ingena eyayo ngoNyaka Omusha, inikezela ngemibono emangazayo ye-pyrotechnics nesibhakabhaka sedolobha. Futhi, akudingeki ukhathazeke ngalesi sigameko esidumile seBerggin. (© vakasberlin.de).
I-Eiffel Tower, iSeine, amabhuloho eParis… isilungiselelo somlingo somkhosi woNyaka oMusha. Futhi ngobusuku awusoze ukhohlwe, kunemenyu ekhethekile yemikhosi (i-scallop céviche, ibele elixakile, ilogo kaKhisimusi) nokuzijabulisa okuvela e-orchestra ebukhoma. Uyacelwa uqaphele ukuthi izivakashi kumele zigqoke ngendlela efanelekile ukuze kugibele isikebhe. (© paris.info)
Imipheme yokulinda, ukushaya imigqomo nokushaya izindandatho onyakeni omusha (noma iHogmanay) e-Edinburgh. Okugqamile ngumbukiso wethoshi elivutha amalangabi nge-29th Disemba. Lapha, ama-Scots ahamba ngethoshi agqoke njengamaViking futhi abase umlilo ngomkhumbi omude phezulu kweCalton Hill.
I-Edinburgh's Hogmanay ingenye yemikhosi enkulu futhi engcono kunazo zonke yoNyaka oMusha emhlabeni. Joyina izinkulungwane zabathwali bezithoshi njengoba zakha umfula womlilo ukusuka eRoyal Mile yomlando kuya kwindodana et lumiére kanye nesiphetho semililo eCalton Hill.
E-Hogmanay uqobo, isenzo siqhubekela kuPrinces Street enkabeni yedolobha lase-Edinburgh ngaphansi komgwaqo omangalisayo weSakhiwo sase-Edinburgh. Abantu abasondelene ne-80,000 bahlanganyela kuNyaka oMusha kwiKhonsathi eGadini enomculo obumnandi obukhoma kanye nokuzijabulisa, ama-DJ's, izikrini ezinkulu, imigoqo engaphandle kanye, ama-Fireworks odumile womhlaba u-Edinburgh Hogmanay Midnight Fireworks ezindongeni zamakhosi. Joyina iqembu lezolimo elinomdlandla we-whisky, ikhekhe lezithelo no-Auld Lang Syne ohlabelela kanye no-Eva Wonyaka Omusha uqobo.
Ngeke nje ubone iningi labomdabu base-Edinburgh emikhosini esemthethweni yeHogmanay koyedwa, kunengqondo ngokuphelele, isizathu: bayazi ukungabaza ngesimo sezulu. Esikhundleni salokho, thola abakwaScot befaka ukubheja kwabo ngezinto zasendlini ngaphambi kokufaka indawo yamahhala ukubuka ukuboniswa kwenkundla phakathi kwamabili. I-Smart, i-boho Stockbridge inomcebo wama-pubs amahle.
IBalmoral iyihhotela elihle kunazo zonke e-Edinburgh, futhi iyindawo enhle kunazo zonke yokuthola kabusha emikhosini kaHogmanay. Kokunye okuzobe kusendaweni, i-Edene Locke, edolobheni laseGeorgia eliseNew Town, kunikeza isivunguvungu esiphelele seminyaka eyi-pink yeminyaka kanye ne-Elephant's Breath, imininingwane ngethusi, izihlalo eziwubala nezitshalo ezishisayo. (© VakashelaScotland).
Ubusuku boNyaka oMusha ePorto bungagujwa ezindaweni eziningana ezizungeze idolobha.
NgoDisemba 31st, kunamaphathi emigwaqo amaningi nezinhlelo ezengeziwe ezisebenza njengokukhethwa kwezinkulungwane zezivakashi ezikhetha ukugubha uNyaka Omusha ePorto.
Iphathi enkulu yenzeka e-Avenida dos Aliados, phambi kwePorto City Hall.
Yilapho isibalo esikhulu sabantu sihlangana khona futhi ubusuku buhlala buba nezokuzijabulisa zomculo kanye nezicishamlilo.
Kodwa-ke, uma uthanda, ungachitha u-Eva Wonyaka Omusha ngendlela ehlukile: ugibele enye yemikhumbi ehlukahlukene yokuhamba ngomgwaqo egcwalisa uMfula iDouro ngalobu busuku.
Amakilabhu asebusuku kaPorto, ngakolunye uhlangothi, andisa injabulo yobusuku kuze kuse. (© Visitporto & norte)
Zizwa imisebenzi yokuvakasha ethakaselayo kanye namasiko anjenge-Atomium neManneken Pis. Thola imigwaqo yedolobha ebukekayo yezitolo zeFashoni District, igcwele izitolo zokugqoka nezomqondo nemigoqo enhlobonhlobo nenethezekile, ngamunye ngokukhetha kwawo ubhiya odumile waseBelgian. Ama-DJs angaphezu kwama-60 kuma-15 amaqembu oNyaka omuNyaka azungeze idolobha. Uhla lwamaqembu azo zonke izinketho, ezisuka rock rock n n roll, i-hip-hop ukuya endlini ne-techno, kanye namaqembu anobungane abathandanayo abaziwa ngalo iBrussels. (amabele).
Ungafika eDubrovnik kusuka kuwo wonke amagumbi omhlaba. Ungayishiya ukuze uthole amakhona ahlukene kakhulu womhlaba, kepha futhi ungabuya eDubrovnik. IDubrovnik akuyona idolobha isikhathi esisodwa; kuyisipho sempilo yonke.
Ukuzijabulisa okuhle ngoNyaka Omusha kuhlinzekelwa ukukhethwa kwabadlali abadumile kakhulu baseCroatia. Abahlali baseDubrovnik nezivakashi zabo bazoqala ukwamukela uNyaka oMusha ngohlelo olucebile lomculo nokuzijabulisa. (© dubrovnik.hr).
Ekushintsheni konyaka, yonke iVienna inikelwa ekuhlanganyeleni nasekudaniseni. Umkhondo wonyaka omusha we-Eve New edolobheni eliDala ukugqamiswa. I-ambience enhle ingathokozelwa kakhulu esidlweni sakusihlwa se-gala noma ibhola lomkhosi ngangokunokwenzeka ekhonsathi, opera, eklabhini ye-hip noma kubha evamile. (© wien.info)
Isifundazwe saseRome luhlaka olufanelana nengcebo eningi yenhloko-dolobha, futhi indawo ezungezile, ngandlela thile, ngokuqondile, ithole umthelela womlando wedolobha laphakade. I-Roma mhlawumbe ingenye yezindawo ezinothando kakhulu ngo-Eva Wakho Omusha, uMuzi waphakade wothando.
I-Prague, Czech Republic
IPrague ibikwe njengelinye lamadolobha amahle kakhulu emhlabeni kusukela ngeNkathi Ephakathi. Izichasiso ezinjengokuthi "igolide", "idolobha lezinyoni eziyikhulu", "umqhele wezwe" kuthiwa yiPrague, etholakala enhliziyweni yaseYurophu.
IPrague yemukela unyaka ngombukiso wendabuko owenziwe ngomlilo.
Izicishamlilo zizokwethulwa eLetná Parks futhi zingabukelwa kahle kakhulu kusukela ngamabhuloho nakumbango. (© praha.eu)
NgoDisemba 31st Lisbon bagqoka ukwamukela unyaka omusha. Izinkulungwane zabantu zigcwalisa imigwaqo emikhulu yedolobha nezindawo zomphakathi ukuzogubha phakathi kwabangane boNyaka Omusha.
ITerreiro do Paço izokuba yihholo lephathi lomkhosi wokugubha uNyaka oMusha waleli dolobha elinokuzijabulisa okuningi ukumaka ukudlula kuNyaka oMusha.
ILisboa isiqalile ukubalwa kwehla ngobusuku bayo obukhulu boNyaka Omusha, ozoba seTerreiro do Paço. Kepha lo Nyaka Omusha uthembisa okungaphezulu kakhulu. Ukumaka ukungena kwesibhakabhaka soNyaka omusha weLisboa kuzokhanyisa ngesibukiso esihle somlilo kanye nokuzijabulisa komculo.
Ungenzi amanye amapulani oNyaka Omusha… bese ungena “egumbini lokuhlala” elikhulu kakhulu eLisboa, iTerreiro do Paço, ngokubukwa okuhle kwe-River Tagus nomculo omuhle kakhulu wePortugal. (© Visitlisboa)
Njengeminye imicimbi eminingi eSweden, uNyaka oMusha uye wabuswa kakhulu yiminikelo yendabuko yabezindaba.
Unyaka nonyaka uphela ngokusakazwa bukhoma okuvela kumnyuziyamu waseSkansen ovulelekile eStockholm, lapho izinsimbi zekilasi nevesi likaNyaka Omusha kumenyezelwa esizweni. Kunokuhle futhi kuphephile ngokuqoqa unyaka ngaphambi kwe-TV egumbini lakho lokuphumula.
Abaningi, noma kunjalo, bakhetha umoya obandayo wobusuku. Labo abangenanhlanhla ngokwanele yokuhlala eflethini ledolobha ngombono, bavame ukufuna izindawo zomphakathi phakathi kwamabili lapho bezokwazi khona ukucima amarokhethi bese beqa ukubukwa kwemililo yabanye abantu.
Umi lapho, umbozwe ejokeni lakho elisindayo lasebusika, ubheke phezulu njengamanzi phezulu - noma ngabe yizakhiwo eziphakemeyo ezakhiwe ngesilivere noma umugqa wezinhlwayi zikaphayini - ziza ngomlilo, zikhanya futhi ziqhekeke .. (© Thaien.se)
Ayikho enye indawo efana neGdansk. Amanye amadolobha angafana neGdansk. Indawo yayo eyingqayizivele nomlando weminyaka engaphezu kwenkulungwane 'umlingiswa ocacile nohlukile weGdansk futhi uyinikeza ukuqashelwa okuqinile nokungagcwele phakathi kwamadolobha aseYurophu. Noma kunjalo, idolobha linobuningi bezimangaliso; inawo owayo umoya okwenza kungaphumeleli ukwenza iphutha iGdansk nganoma iyiphi enye indawo. (© gdansk4u)
Yize ingekho imicimbi esemthethweni exhaswe yedolobha, kunenqwaba yamaqembu azimele kanye nezinto ezincane ezenzekayo kulo lonke idolobha
Ubusuku bonyaka omusha e-Reykjavik yisipiliyoni esiyingqayizivele, ikakhulukazi uma kunikezwe iqiniso lokuthi azikho imibukiso esemthethweni yomlilo edolobheni. Lobo busuku obumnandi budalwe kakhulu ngabantu baseReykjavik abahlangene benza umsebenzi omangalisayo. E-23: i-35 isibonisi esikhanyayo semililo yomlilo idalulwa njengoba abantu be-200,000 (abantu abasondelene neReykjavík) baqala ukuzungeza amathani e-500. Ngemuva kwamabili, amakilabhu asebusuku kanye nama-pubs asavulekile futhi imikhosi iqhubeka kuze kube sekuseni. (© visitreykjavik.is)
Lapho iwashi lishaya i-12, abakwaDan obevinjelwe ngokomthetho babuthana eKapa Hall Square ngomugqa ohambisanayo, iBYO bacchanal of popping champagne corks, whoshping rockets and fizzing amakhandlela aseRoma. Ngokuthatha okuhlelekile okuthe xaxa, i-Tivoli Gardens e-twinkly ikhanyisa isibhakabhaka ngoMkhosi wayo we-Firework; izindawo zokudlela zalo zonke zidla ukudla kwakusihlwa koNyaka oMusha; futhi ama-roller coasters avulekile - futhi, izitolo eziningi ze-glögg zisebenza ngesibindi se-liquid.
Bheka ukuthi abakwaCopenhageners bayeka kanjani ukuhlanzeka kobusuku bonyaka omusha njengoba izinkulungwane zabantu abajabule bezithathela emigwaqweni beyokhanyisa iziqhumane zabo zomlilo ngemuva nje kobusuku. Indawo ethandiwe ukubukela le mayhem - okuzwakalayo, kuyisixakaxaka futhi okuyisicefe nje esidabukisayo - yibhilidi leNdlovukazi uLouise, eliwela ngaphesheya kweLakes, enhliziyweni yedolobha.
IBarcelona yidolobha lezikhova zasebusuku, ngakho-ke ukubuyisa umcimbi akuqali ukuzilolonga kuze kube cishe nge11pm. Yilapho izixuku zihlangana ePlaça d'Espanya ukubukela ama-pyrotechnics phakathi kwamabili eMontjuïc, egqumeni elingenhla. Amamitha ambalwa ukusuka lapha, iPoble Espanyol, umnyuziyamu wokwakha izakhiwo ovulekile, uphethe iphathi yomdanso omkhulu kuze kube yi6am.
Elinye lamasiko angaziwa - ngaphandle kokudla amagilebhisi nge-chime ngayinye phakathi kwamabili (ngokungathí sina, wonke umuntu uyakwenza) - kwenzeka ePlaça de Catalunya, enkabeni yedolobha. Lapho nje uNyaka oMusha usungenelele, izinkulungwane ezihlangene zaphonsa amabhodlela azo e-Cava phakathi kwesikwele. Uma lokho kuzwakala kusabisa kancane, yibhekisa amabheshu e-kilabhu athandwa kakhulu.
I-Amsterdam exubene kahle futhi ehlale ihlala njalo ephathini iyinhlangano ye-impromptu street frolics ku-31 Disemba, kodwa uma kunendawo eyodwa ethembekile yokuba phakathi kwamabili, yi-Magere Brug ('Skinny Bridge'). Lapha, abahlanganisi bezikhathi zokuhlangana bahlangana ukuzobuka iziqhumane zomlilo ziqhuma phezu koMfula Amstel, bese beqhubeka nemikhosi yabo kulo lonke idolobha. INieuwmarkt (Chinatown), ikakhulukazi, yaziwa ngesimo sayo sasemkhathini.
Ukuhamba ngendlela eya ezakhiweni zomlando ze-25 - ukusuka emahofisini e-canal-side century-17th century to workshops's artisans - I-Pulitzer Amsterdam ithole iminyaka engu-400 yezindaba ezivela kubahlali bangaphambilini, kufaka phakathi imindeni emikhulu nomngane kaRembrandt's. Amakamelo okulala angena ngobukhulu nobukhulu, kepha isimo somoya singesokuthula nokuzola, sinama-pastels athulisiwe kanye nokuthinta okuluhlaza kokhilimu onsomi. Ixhuma womabili amathambo amadala nomoya obalulekile wanamuhla wedolobha.
Ukuqhuma okukhulu enhlokodolobha entsha epholile yaseYurophu kusePraça do Comércio, okuyindawo yesikwele enkulu eMfuleni iTagus. Ngendlela yasePutukezi ejwayelekile, i-fiesta iqala sekwephuzile: umculo obukhoma uqala phezulu ngezithuba ze-10pm bese uyaqhubeka ngemuva kweziqhumane zomlilo ezingena phakathi kwamabili. Inqwaba yabantu bendawo - behlome nge-fizz yabo kanye nezinkomishi zepulasitiki - bangatholakala bephuza futhi bedansa enhliziyweni yesenzo, ngakho-ke azizwakali njengesigaxa sabavakashi.
Isifunda saseLisbon esisenkabeni yeBairro Alto sihlala siyindawo yephathi - sibonga imithetho yesitsha esivulekile se -ontex - kanti iNYE lapha ayifani. Ama-Partygoers ajwayele ukufika lapha ngemuva kweziqhumane zomlilo zePraça do Comércio, futhi umakhelwane futhi uyikhaya kwezinye izindlu ezivelele ze-fado, lapho ungabuka khona umculo wesintu wamaPutukezi ngesidlo sakusihlwa.
I-Koh Phangan, Thailand
Kunemicimbi emabhishi eziqhingini zaseThailand unyaka wonke, kodwa into emnandi kunayo yonke yi-Eve New Year ngoKoh Phangan, ikhaya lephathi yenyanga egcwele kakhulu emhlabeni. Ukuguqula ukuzungeza Ibhishi laseSunrise eHaad Rin, i-maelstrom iqala lapho nje kuba mnyama bese igibela ngaphandle kokuphuma kwelanga bese kungena ntambama elandelayo.
Yiya kuma-cocktails nesidlo sakusihlwa senhlanzi esanda kubanjwa futhi eyosiwe ohlangothini lweLanga lesiqhingi, futhi ungacabangi nokujoyina iphathi kuze kube nje phakathi kwamabili. Bese ubuyela eSunset Beach ukuyobhukuda kokusa.
Abanye bathi amaqembu kaGogo akayona into abeyiyo ngaphambili. Sithi kusenzima ukushaya umdanso ogwini, nesihlabathi esiphakathi kwezinzwane zakho namalambu amahle afakwe kulo lonke isihlahla sesundu, iziketi ze-sari ezilandelanayo ngaphansi kwezinkanyezi. Futhi unyaka omusha ka-New Year yisikhathi esingcono kakhulu sonyaka sokuya ephathini eGoa, enezicishamlilo nemikhosi yonke ngasogwini lwezwe lase-India. Ngeshwa, izimbotshana ezinkulu nezinkulu kakhulu zigxila e-Anjuna, lapho oDJ abasezingeni lomhlaba bedlalela izixuku ezinkulu kuze kube sebusuku.
Ukuthola iphathi obusondelene kakhulu, iya ePalolem, eningizimu. Leli chibi elinomango osehlathini ligcwele imishayo yasolwandle enamabibi ahlangana nobusuku bethayela, izingwekazi ezigeleza amahhala nezicishamlilo phakathi kwamabili.
EKapa, ​​eNingizimu Afrika
Unina wayo yonke imigubho kuMama Womuzi use-V&A Waterfront, lapho kukhona konke ongakufuna endaweni eyodwa esebenzayo: isidlo sakusihlwa, umculo bukhoma, ukudansa, iziqhumane zomlilo. Futhi, kunokubukwa kweTafula Mountain nogu lwe-Atlantic. Kuyamangaza - kepha uma ufuna iphathi nokunambitheka okuningi kwasendaweni, kufanele uqonde esihlabathini.
Ipikicha yelanga e-Clifton 4th Beach, isifiso esihle endaweni yaseClifton esicebile, iyindlela ethandwa ngabakwaCapetonia. Lapho-ke sekuyisikhathi sokushaya enye yamakilabhu amaningi edolobha olwandle. Ithikithi elishisa kunazo zonke: IPacha's elite soirée at Grand Africa, ogwini lwangasese lukaGrand, olubheke eRobben Island.
Yaziwa kakhulu ngegama elithi “iNingizimu Afrika,” iKapa yindawo othandwayo yabahambi abaningi kuleli lizwekazi, futhi unyaka omusha wonyaka omuhle isikhathi sokuhlola ukunikela ngamasiko ahlukahlukene ngaleli dolobha elihle. Idolobha linikezela indawo yamahhala-isiza amasongo akho kanye nanoma yikuphi okuncane ongakugubha nakho.
Uma ucabanga ukuthi iDisney kwakuyisizathu esihle kakhulu sokuya e-Orlando, kahle. . . awukalungi. Akungabazeki ukuthi akekho noyedwa owenza izihambi ezifana neDisney, futhi uma kukhona indumezulu neziqhumane njalo ebusuku unyaka ngamunye, ungaqiniseka ukuthi amaholide angumbukwane owengeziwe. I-Eve New Eve's e-Disney igcwele amaqembu anama-themed, amamenyu akhethekile, nemicimbi ezindaweni zokudlela ezihlala kuwo wonke amapaki, nama-ops wezithombe nabo bonke abalingiswa bakho abathandayo, kepha i-Countdown to Midnight iyinto ekhangayo enkulu ngoDisemba 31. Le soiree enkulu ifaka ama-cocktails e-Fantasia Ballroom, "cheftainment" (engeza injongo entsha yokudlala ngokudla kwakho, njengoba abapheki belungiselela ukubukwa kwe-shadowbox), i-DJ exhumanayo, ibhendi ebukhoma, futhi, i-champagne toast ngaphansi komlingo owodwa ukuveza iziqhumane.
Ukuqala okungokomoya konyaka, yibhekise emigubhweni yaseTokyo's Shogatsu. Abantu bendawo bashisa iDaruma (ofisa onodoli) emathempelini futhi babopha izibikezeli zenhlanhla ezindaweni eziphakemeyo. Ukukhala kwensimbi yokulinda ebusuku kuNyaka oMisha ngeziteleka ze-108 zokuqeda izifiso zezwe ze-108. Ngo-2nd ngoJanuwari, i-Imperial Palace ivulekela umphakathi ukubingelela uNyaka oMusha.
Uma ufuna iziqhumane zomlilo namaqembu aphambana nobusuku bonke, iya e-Yokohama ngaphesheya kweTokyo Bay. Yize ingeyona ingxenye yedolobha ngobuchwepheshe, iyingxenye yeGreater Tokyo futhi, kanye nezakhamizi zayo ezingaba yizigidi ezine, kukhona okuningana okufanele kwenziwe njengoba kungenye yezifunda kuphela ezigubha leli holide ngendlela yaseNtshonalanga. Kokunye eTokyo, thatha enye indlela nge-New Year's Eve bese uvakashela elinye lamathempeli amaningi okukhala kwensimbi. Izixuku zakha kuqala leli siko lonyaka, ngakho-ke fika ngaphambi kwe-10.
IChristmas Islands ingaxhumana kakhulu kwelinye iholide (laqanjwa nguCaptain Cook ngenkathi ewela iziqhingi ngoKhisimusi we-1777), futhi kusendaweni ephumuzayo, engokwemvelo kunendawo yephathi, kodwa iziqhingi zibambe okhethekile beka isiko loNyaka oMusha: Basendaweni yesikhathi sokuqala ukufika phakathi kwamabili. Amaqembu ambalwa angatholakala emahhotela phesheya kweziqhingi, ikakhulukazi esiqhingini esinabantu abaningi kakhulu seGilberts, kepha lokhu kuyindawo ongavakashela amalungelo okuqhosha kukaNcibijane ngaphezu kwanoma yini enye. Awungeke uvakashele izindawo zokugcina ukuze ubone phakathi kwamabili (i-Baker Island neHowland Island, izindawo ezingabanjanisiwe zase-US phakathi nendawo phakathi kweHawaii ne Australia, zitholakala kuphela ngemvume ekhethekile, imvamisa abacwaningi), ngakho-ke, iziqhingi zikaKhisimusi ziyindlela yakho kuphela yokusetha irekhodi lesikhathi salolu hlobo.
Akuyona imfihlo ukuthi iGrisi ibingakaze ibe sesimweni esihle kakhulu sezimali isikhathi esithile, kepha imicimbi enkulu yo-Eva Wonyaka Omusha isanda kubuyela edolobheni lase-Athene, futhi izindleko eziphansi zokuzijabulisa edolobheni lasendulo zengeza kuphela isikhalo sayo samaholide. E-Atop the Acropolis, iParthenon isebenza njengemuva lwangemuva kusihlwa samakhonsathi nokunye ukuzijabulisa bukhoma ngaphambi kokucima umlilo ngesibhakabhaka phakathi kwamabili, kepha ukubheja kwakho okuhle kakhulu ukuhambela elinye lamaqembu amaningi emahhotela ahlinzeka ngamaphuzu ophahla lwendlu. I-Athene iyikhaya lezimanga eziningi zalezi zindawo ezingaphandle, futhi cishe zonke zazo zizobe zigubha ngesitayela ngokubukwa kwephaneli yama-pyrotechnics.
Uma uzimisele ukushintshanisa ubhiya, iDenver kufanele ibe phezulu kuhlu lwakho lomkhosi wokuphinda u-New Year's Eve. Futhi, ungajabulela ezinye izinto eMile High City ongeke uzithole ngokusemthethweni kwamanye amadolobha. Kodwa noma ngabe ufuna kusihlwa kwesikebhe esimnyama esine-champagne toast, iDenver iyikhaya lamathani amabhola nama-galas aphethwe yikho konke ukusuka emahhotela kuya endlini ye-opera. Emindenini, iDenver ingelinye lalamadolobha athuthukile anikezela ukuhanjiswa kwangoko kwemibukiso yawo yomlilo (i-8 pm), futhi i-zoo ize ibe nohambo lokuhamba ngezithombe ze-150 ezikhanyiselwe izilwane.
IVenice ihlala igcwele futhi, kuyavunywa, ngalesi sikhathi sonyaka siletha izixuku ezengeziwe kunokwejwayelekile edolobheni elincane elintantayo lase-Italy. Kepha ngesizathu esihle. Yize kunezindleko ezinkulu, ezibandayo futhi ezigugile zemisele, umlingo wesikhathi samaholide ubukeka utholakalela ukwedlula okujwayelekile kusuka kule ndawo yothando, okwenza kube yindawo efanelekile yokuqabula phakathi kwamabili. IVenice akuyona inkambiso yedolobha (okungenani hhayi esidlangalaleni), kepha iSt. Mark's Square yenza umehluko omkhulu ku-Eva Wonyaka Omusha, ngamakhonsathi agcwalisa i-piazza enkulu kuze kube yilapho iziqhumane zomlilo ziqhuma lapho kubangwa khona udoti.
Izicishamlilo zomphakathi ziwumcimbi oyisisekelo cishe wazo zonke izikhathi eziphezulu zo-Eva Wonyaka Omusha kulolu hlu, futhi iHelsinki inombukiso wayo oshukumisayo onganikeza, kepha isimo sokucima umlilo saseFinland sithakazelisa kakhulu ngasohlangothini oluyimfihlo. Ama-fireworks athengiselwa izakhamizi phakathi nesonto phakathi kukaKhisimusi no-New Year's Eve, futhi angasetshenziswa kuphela ukusuka ku-6 pm ngoDisemba 31 kuze kube yi-2 am ngoJanuwari 1, okwenza lawo mahora ayisishiyagalombili agxile ekuhleleni konyaka we-pyrotechnic. Ungakhohlwa ukuhlanganyela kwesinye isiko saseFinland esimnandi ngaphambi kobusuku siphelile: Ukuthulula itoti elicibilikile emanzini futhi kufakwe ingcebo yakho kufakwe kugqabha oluhle kungenzeka kuyindlela ebanda kunazo zonke yokubikezela unyaka wakho ozayo (futhi ungakhathazeki — bona nje cishe ungasho lutho olubi).
Ubusuku boNyaka oMusha yisikhathi sasehlobo eBuenos Aires, futhi lokho kwenza ukuphahla kwamachibi amaphathi kube yindawo enhle yokufaka uNyaka oMusha. Ukusuka lapha, ukubukwa kwama-fireworks akunakuphikwa (nama-sunnyes uma unephathi ende ngokwanele). Phansi, amaqembu emigwaqo agcwala cishe kuyo yonke imigwaqo ukusuka emashini asendaweni anentshiseko ezindaweni ezisebenzayo kuya emigubhweni ebukhazikhazi ezindaweni zokuvakasha eziningi. Futhi-ke, ama-nightclub adumileyo edolobha ayizihambi ezixukwini ezihlukumezayo zabagubhi boNyaka oMusha.
I-San Miguel de Allende
Asikho isikhathi esibuthakathaka sokuvakashela iSan Miguel de Allende, ukufaka ngokushesha uhlu lwamabhakethi wabahambi abaningi bomhlaba, kepha amaholide nemikhosi yilapho leli khaya elihlanganisiwe likhanya ngempela. Amabala, umculo, nemibuthano ejwayelekile iyaphuma emizileni eminingi emincane ye-SMA, kepha izixuku ezixakile e-El Jardin, esigcawini esikhulu sedolobha, zidlulisa umoya wokutheleleka wokugubha okungafanele uphuthelwe. Kungenzeka ukuthi alikho idolobha elithanda i-pyrotechnics ngentshiseko efana neSan Miguel de Allende futhi, i-El Jardin iyindawo ekahle yokubhekana neziqhumane ezazicashile futhi zibonakala zingaqhamuki zenyuka ngaphezu kwe-neo-gothic Parroquia (isonto). Noma kunjalo, uma umgwaqo ungekho kuwe, amaqembu amaningi ophahla ophahleni ahlinzeka ngokubukwa okumangazayo, kepha kuzodingeka ugcine indawo yakho kusenesikhathi. Gcina ikhamera yakho ilungele i-mojigangas, imidlwane ekhudlwana kunobomi ebeka phansi imigwaqo bese ibhekabheka phezulu kobusathane.
Kungabanda, kepha kuvame ukufudumala kunezinye izingxenye eziningi zeCanada. Joyina i-100,000 nezinye izithandani emcimbini obusebusuku bonke emigwaqweni eCanada Endaweni yamakhonsathi namathani amaloli wokudla, okuphetha ngawo wonke ama-firework ongawalindela (kufaka phakathi umdlalo wokuqala wemindeni e-9 pm). Noma, gubha ubusika bese usebenzisa iholide emcimbini we-snowshoe fondue eGrouse Mountain, e-polar bear plunging e-English Bay Beach, noma ukhubeka phesheya kwethoshi elikhanyayo eSasquatch Mountain. Kepha ungakhathazeki, kunenqwaba yemikhosi yokugubha uNcibijane yonyaka omusha etholakala emaphathini akhazimulayo idolobha lonke.
ISpar parade eLes Deux Alpes, eFrance
Thatha i-skis yakho ukuze ungene onyakeni omusha eLes Deux Alpes, elinye lamahhotela aziwa kakhulu e-Alpine eFrance. Jabulela ukuthokozela kanye neziqhumane ngaphambi kokucwaswa kwe-New Year's Eve torchlit, lapho ungabuka khona othisha be-ski bekhombisa amakhono abo piste.
Amagilebhisi aseCanary Islands 'aphakathi kwamabili
Ubusuku bonyaka omusha wokuthambisa onamaphathi kuma-plazas nokuthokozela emabhishi anesihlabathi esimnyama eziqhingini zaseCanary. Landela isiko laseSpain ngokudla amagilebhisi enhlanhla we-12 - elilodwa nge-chime ngayinye - njengoba iwashi ligadla phakathi kwamabili.
AmaRoses ePasadena, Usa
Ubuciko bezimbali kanye nokukhanya kwelanga kweCalifornian kwenza iPasadena ibe ngenye yezindawo ezihamba phambili zomhlaba omusha we-10. Izibukeli eziyisigidi zithutheleka eRose Parade eneminyaka eyikhulu ubudala ngoSuku Olusha loNyaka. Joyina labo ukubukela ama-floats amahle anembali yezimbali, izinqola ezidonswa ngamahhashi kanye namaqembu ahamba umendo ngokuhamba kweColorado Boulevard.
Noma yini oyenzayo futhi lapho uya khona yiba nonyaka omusha ojabulisayo!
Ngeminye imininingwane sicela uvakashele amawebhusayithi ethu emithombo: